Sida loo iibsado more on Amazon leh keywords bartilmaameedka ugu muhiimsan dooro hab sax ah?
Haddii aad rabto in aad ogaato sida loo iibiyo more on Amazon - tilmaan cad ah si loo doorto Amazon ugu sareeya iibinta keywords iyo dabaqyo dheer-qabashada waa kaliya ee aad! Qof waliba wuu ogyahay in badeecada wax soo saarka loo adeegsanayo ereyada raadinta saxda ah waa qayb muhiim ah oo ka mid ah ganacsiga kor u kaca ganacsiga. Wax walbaa waa, inkasta oo xitaa haddii aad wax garanayso, macnaheedu maahan inaad xaq u leedahay inaad samayso sida saxda ah ee. Taasi waa sababta hoosta aan ku socdo si aan kuu tuso sida loo iibsado wax badan oo ku saabsan Amazon by qaybaha waaweyn ee soo socda ee boggaaga wax soo saarka ee keywords bartilmaameed bartilmaameedka - sigelei 200 watt temperature control release date. Sidaas, aynu bilowno.
Sidee loo iibiyaa More on Amazon - Hagaha Amazon Optimization for Keywords
Halkan waxaan ka arki doonaa dhan oo ku saabsan qaybaha lafaha soo socda ee bogga Amazon ee wax soo saarka for keywords bartilmaameedka ugu muhiimsan iyo jumlada raadinta dheer-dheer. Intee in mudnaan la siiyaa waa in la siiyaa cilmi-baaris caan ah? Qodobbada muhiimka ah ee loo yaqaan 'keywords'? Waa kuwee meelaha ugu fiican ee aad ku qori karto ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah? Sidee loo ogaadaa faahfaahinta ereyada muhiimka ah ee loo isticmaali karo si aad uhesho bogsashada alaabtaada? Aan la bilaabi karno
Marka laga eego aragtida Amazon oo ah mashiinka raadinta ballaaran ee wax soo saarka iibka ah, ereyga "keyword" wuxuu u taagan yahay hal kelmad, Isku-darka guud ee loo yaqaan 'shopper' oo isticmaala si uu ugu qoro baraha raadinta halkaas. Qaadashada guud, guud ahaan raadinta guud ee keywords waa mid aad u badan oo ah matoorada raadinta waaweyn (sida Google laftiisa) iyo Amazon oo leh darajada A9 ee algorithm.
Amazon iyo Keywords
Sida loo iibsado more on Amazon? Waxyaabuhu waa in jawaabtu ay noqon karto mid sahlan oo runtii waa mid isku mid ah isla waqtigaas. Guud ahaan, qof kasta oo iibsadaha ah ee Amazon wuxuu kor ugu qaadi karaa meesha ugu sareysa ee sheyga laga raadinayo - iyada oo loo marayo habka wax soo saarka alaabooyinka loogu talagalay keywords key target key. Dabcan, way fududahay in la yiraahdo intii la qabtay, laakiin haddii macaamil macquul ah uu ku guul daraysto helitaanka dalabkaaga adigoo raadinaya ereyga muhiimka ah - adigoon ku dhicin wax horumarin ah oo lagula socon karo ganacsigaaga internetka oo dhan, sax?
Xagee loo helaa ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah?
Waxay u egtahay mid aan maskaxda lahayn, laakiin meesha ugu horeysa ee lagu daro ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah waa alaabtaada oo liiska. Waxaan ula jeedaa in aad ku dhejisid ereyada muhiimka ah ee qaybta bogga wax soo saarka, marka lagu daro amarka hoos u dhigaya muhiimada ay leedahay (sida Title Product, Sharaxaadda Waxyeelada, Liiska Xayeysiinta Muuqaalka, Image Sub Tags). Habkaas, Amazon A ranking rikoodhka A9 algorithm baadhi doonaa liiska aad soo saarka ee miisaanka, helitaanka keywords bartilmaameedka ugu muhiimsan iyo isku darka search dheer, iyo iyaga u tixgelin si ay ugu dambeyntii go'aansato - waxyaabaha raadinta ee ugu fiican-la xiriira pages aad, iyo dhab ahaan meesha ay ku tusaan dalabyada ku qoran liistada SERPs.
Iyo meesha labaad ee loo isticmaalo ereyada muhiimka ah waa qeyb gaar ah oo loo yaqaan "shuruudaha raadinta. "Qeybahaasi waxaa muujinaya Amazon mar kasta oo aad abuurto liis cusub oo wax soo saareed. Si fudud u dhig, waxaa lagu siin doonaa shan goobood oo leh 50 calaamadood oo kasta si aad u buuxisid wax kasta oo aad tixgelisid inaad aqbali karto si aad uga dhigto goobaha raadinta ee ku habboon jihadaada. Iyadoo la tixgelinayo in goobahaas aan la arki karin dukaamada guryaha ku yaala Amazon, waxaa loo isticmaalaa si ujeeddooyinka rikoodhada ah. Oo halkan waa sida loo iibsado wax badan oo ku saabsan Amazon - marka hore, hubso inaad isticmaasho qaybaha dhabarka ah si caqligal ah, si aad uga faa'iidaysato ugu badnaan kartida liiska. Fiiro gaar ah si aad u sii fiiri qaybtan si aad u hesho wax kasta oo meel. Waa inaad si sax ah u ogaatid waxa ujeedada iyo ujeedada aad ka qabatey halkaa - Ha ka baqin inaad si qoto dheer u dhex gasho mawduuca oo akhri ugu yaraan labo tallaabo tallaabo tallaabo ah oo la xariira arimaha raadinta dhabarka.
Sidee looga iibiyaa More Amazon - Xaqiiji ereyada saxda ah
Tallaabada koowaad: Maskax furan
Talaabada koowaad ee halkan waa qaadashada weyn sawirka keywords bartilmaameedkaaga ugu muhiimsan iyo fahamkooda miisaaniyada guud ee la xiriira isticmaalka joogtada ah ee la xidhiidha badeeco gaar ah ee aad iibsatay on sale. Aniga ahaan, waxaan kugula talinayaa isticmaalka Qorshaha Keyd-ga Key-Google-waxa uu noqon karaa meel aad u fiican oo ah baaritaanka ereyga ee muhiimka ah. Sababtoo ah waxay ka soo jiidataa xogta raadinta dhabta ah ee geeska internetka, halkii ay xooga saari lahaayeen inta badan suuqa kala iibsiga ee suuqa sida Amazon laftiisa. Marka, si fiican ayaad u isticmaali laheyd qalabka Qorshaha Keydka - ugu yaraan si aad u qaabeyso liiska asaasiga ah ee muhiimka ah bartilmaameedyada muhiimka ah ee aad doonaysid inaad ku nadiifiso oo aad isticmaasho wax yar ka dib.
Tilaabada Labaad: Dhexdhexaadinta
Next, waxaad u baahan doontaa inaad soo qaadato qalab gaar ah oo loo qoondeeyey si aad u leexiso liiska muhiimka ah ee ereyada muhiimka ah si aad u gaaban. Waxaan ula jeedaa inaad fahamto isbedelada dhabta ah ee isticmaalka lammaanaha muhiimka ah iyo isdhaafinta dheeraadka ah ee aad haysato, inaad haysato kelmado raadin oo kaliya oo lagu guulaysto oo laga tirtiro kuwa kale oo ka mid ah kuwa dantooda leh. Aniga ahaan, oo ah ciyaaryahan weyn oo waqtiga dhabta ah oo dhab ahaantii ogyahay sida loo iibsado wax badan oo ku saabsan Amazon, waxaan ku talinayaa isticmaalka mid ka mid ah qalabka cilmi baarista ee soo socda iyo qaababka online, sida KeywordInspector, KeywordTool. io, JungleScout, Sellics Amazon Toolkit, ama MerchantWords. Mid kasta oo ka mid ah qalabkani wuxuu leeyahay waxqabadka loo adeegsan karo, sidaas darteed dhab ahaantii waa adiga kaliya kan soo qaado.
Talaabada 3aad: Helitaanka
Markaad nadiifisid liistada muhiimka ah ee ereyada muhiimka ah ee liiska hubinta liis gaaban oo la adeegsan karo, waa wakhti aad ku qaadato tallaabada ugu dambeysa. Waa kuwan qaybaha ugu muhiimsan ee boggaaga wax soo saarka si loo yareeyo keywords keywords:
Nooca Product - waxaa loogu talagalay in lagu qaado ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ee hoos iyo inta jeer ee isticmaalka (muhiimada).
Liiska taxaalka dhibcaha - inaad taxaddar u yeelatid, sida qaybtani ujeedadeedu tahay in lagu bixiyo sheyga wax soo saarka ee liis gaaban iyo mid kooban ee astaamihiisa aasaasiga ah iyo faa'iidooyinka, halkii ay ka buuxin lahaayeen inta badan ereyo muhiim ah sida ugu macquulsan.
Qeexitaanka alaabooyinka - Qeybta hore ee dheeraadka ah, sharaxaaddaada alaabtu waa meel aad u fiican oo lagu dari karo inta kale ee ereyada ku haray iyo qoraallada raadinta ee dheeraadka ah.